फ्यानहरुको आक्रोस, रबिलाई फसाउदै छन् ! – Dainik Pana
“प्रतिशोध र मजाकपुर्ण क्रियाकलापले मानिसलाई सत्यताबाट टाढा राख्छ । सोच्न र कल्पना गर्न पनि नसकिने बिषय आरोप लगाएर रवि लामिछाने र उनको टिमलाई तनाव दिँदा मृत्युवरण गर्नेले सच्चा श्रद्धाञ्जली पाउँदैन ।
मृतकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली त्यो हो जुन सत्यतामा आधारित बिषयमा मात्र बहस हुन्छ । रवि जी अब एक ब्यक्ति मात्र होइनन् ,उनि सिंगो संस्था र परिपक्व अभिभावक बनिसकेका छन् । अभिभावक भनेको सधैं सही बाटो देखाउने शिक्षक हो । शालिकराम पुडासैनीको मृत्युले रवि जी आँफैले बिक्षिप्त पीडा भोगिरहेका छन् । किनकी एउटा शिक्षकलाई बिद्यार्थीको पीडाले निकै चोट पुर्याउँछ । रवि जीले भोगेको चरम पीडामा मृतकका बिषयलाई अनुमानका आधारमा चहर्याइरहेको घाउमा कसैले पनि नुनचुक छर्ने गंभिर भुल कदापी नगरौं ।
यहाँ प्रसंग रवि जी र उनको समुहको समर्थन वा पक्षपुर्ण हुँदै होइन । हाम्रो समाज भीरतिर किन कुदिरहेको छ भन्ने मात्र हो । हामी किन यति निर्दयी भयौं भन्ने हो । यसले रवि जीलाई मात्र पीडा दिंदैन, मृतकको परिवारलाई झन पीडा माथि पीडा थपिदिनेछ । सामाजिक संजालमा हामीले पोख्ने अभिब्यक्ति र गर्ने टिप्पणी हाम्रा परिचय हुन् । हामीले हामीलाई कस्तो परिचय दिने हाम्रै हातमा छ । झुठ, कपोलकल्पित, भ्रामक, प्रतिसोध, पुर्वाग्रह र आधारहिन बिषयमा नबोलौं । टिप्पणी वा कुनै बिषय शेयर नगरौं । यसले हामीलाई समाजमा सही परिचय दिनेछ । यस्ता बिषयमा प्रहरीले छानविन गर्छ । न्यायालयले न्याय सुनाउँछ । त्यसपछि चित्त नबुझेका बिषयलाई न्यायालयकै मार्गबाट सुल्झाउने आधारहरु प्रशस्त छन् । हुल र भीडका पछि लागेर आँफै दिग्भ्रमित हुने काम कहिल्यै नगरौं । हरेक घटनाका evidence मा सत्यता प्रमाणित नभइ अनुमान गर्न हुँदैन । यस्ता अनुमानहरु आँफैमा गंभिर अपराधजन्य काम हुन् ।
अर्को कुरा, अनलाइन वा जुनसुकै मिडिया चलाउने र काम गर्नेले तथ्यहिन समाचार कहिल्यै प्रकाशित÷प्रशारण गर्न हुँदैन । यसले सदाका लागि तपाई र तपाईको मिडियाको बिश्वसनीयता समाप्त पार्नेछ । गुमिसकेको बिस्वसनीयता कहिल्यै फर्केर आउँदैन । आज Rabi Lamichhane , सिधा कुरा कार्यक्रम का निर्माता Deepak Bohara र सबै टिम सदस्यहरुलाई हिलो छ्याप्दै गर्दा स्वंय हिलो छ्याप्नेहरु फोहोरको दलदलमा भासिएको भबिस्यमा छर्लंग देखिनेछ । त्यसैले, हामी हाम्रो समाजलाई सभ्य, उच्चस्तर र सुरक्षित बनाउने जिम्मेवार हाम्रै काँघमा छ । हामी जिम्मेवार नागरिक बनौं । असल र सकारात्मक सोचाईले तपाईं हामीलाई सुन्दर र सभ्य परिचय दिनेछ ।”
रबिका सुभचिन्तक निशान क्षेत्री भन्छ्न?
रबि दाइ तपाईंको साथमा हिजो, आज, भोलि मात्र हैन। देश बिदेस जहाँबाट भय पनि सधैंको लागि म लगायत तपाईंका सुबचिन्तकहरुको साथ सपोट भैराखने छन। 2/4 जना काचुलि फेर्दै गरेका फ्याउराहरुले तपाइको बारेका आलोचना गर्दै गर्दा तपाईंका सुबचिन्तक डराउने वाला छैनन।
रबि दाइ तपाईंले गरेको गुन नेपाली जन्ताहरुले कहिले भुल्ने छैन्न। तपाइको काम प्रती सिङगो देसले नै परिवर्तनको मुख फेरदै छ। आज देस भरी तपाइको नकारात्मक आलोचना हुदै गर्दा।
तपाईंको सुभचिन्तक हरु देश बिदेश मा रगत उमालेर बस्न बाधे छ्न।देश बिदेश बाट आवाज उठाउदै भन्छ्न। रबि जिन्दावाद। देश बिदेश बाट तपाइँलाई फसाउन खोज्ने हरुलाइ प्रशन गर्दै छ्न। रबि लामिछाने लाई केही भयो भने।देश मा रहतको खोला बगने छ्।रबि दाइ तपाईं ले जन्ता लाई लगायको गुन तपाइलाइ पर्दा लगाउने छ्न जन्ताले गुन।
तपाईंले देश मा गरेको काम को मुल्यांकन जन्ता ले गरेका छ्न। हिजो को जन्ता र आज को जन्ता मा कसरी परिवर्तन आयो । जन्ता ले राम्रो सग बुझेका छ्न । अब जन्ताले बुझिसकेका छ्न । नेता जन्ताको लागि आबसेक छैन ।अब जन्ताको लागि आबसेक छ । जन्ताको लागि लडने र जन्ताको लागि बोल्ने ब्याक्ती कुसल पत्रकार रबिलामिछाने।
तपाईंले गरेको काम ले आज सयौं गरिब जन्ताले नया जिन्दगी पायको लाखौ जन्ताले देखेका छ्न । तपाइले गर्दा सयौं युबा ले आफनो देश मा बस्ने अबसर पायका छ्न ।खाडी मा गयर आफनो जिन्दगी लाई पसु सरहको जिन्दगीमा जीवन बिताउदै बसेकी नेपाली चेली हरुले नया जिन्दगी को सुरुवात गरेको लाखौ जन्ताले देखेका छ्न । आज तपाईंको बारेमा केही भतुवा हरुले अनेक थरिको आरोप लगाउदै गर्दा । तपाईंको सुभचिन्तक हरु ले च्यालेन्ज गर्दै छ्न। खबरदार ✊ नेपाली जन्ताको लागि लडाइँ लडदै गरेका रबि लाई कतै बाट केही भयो भने सुभचिन्तक हरु रोकेर रोकिने वाला छैन ।
मैले लेखेको शब्द मा कसैलाई पिर पर्न जान्छ भने सरि भन्दै । पत्रकार साथी हरुलाइ पनि केही बोल्न मन लाग्यो।कति पय पत्रकार हरुले लेखेको सामाचार बाहिर हेड लाइन यौटा हुन्छ भित्र पडदै हादा फरक हुन्छ ।किन यस्तो मोहदय।सालिकराम ले रबि कै टचर ले गर्दा आत्म हत्या गरेकाहुन के पर्मान छ।वास्तविक के हो त्यो मात्र लेखनोस।रबि को सामाचार मात्र है यस्ता धेरै सामाचारहरु आयका हुन्छ्न
बौद्ध–जोरपाटी सडकमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप
Posted on May 9, 2019 May 9, 2019 Author Dainik Pana
काठमाडौंको बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्डको मर्मत सम्भार नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । तस्वीर : शैलेश काेइरालाबाट चार वर्षदेखि सडकखण्डको कामलाई अलपत्र छाडेको बताउँदै उनीहरूले बिहीबार सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् । बौद्धबासीले विरोधमा बजार समेत बन्द गराएका छन् भने प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ । विसं २०७२ देखि शुरु गरेपनि २०७६ […]
Posted on August 14, 2019 Author Dainik Pana
पुल बन्न १० बर्ष लाग्यो, अब साउन भित्र सकिने
Posted on June 14, 2019 Author Dainik Pana
जेठ ३१, रोल्पा । पश्चिम रोल्पालाई सदरमुकामसंग जोड्ने माडी खोलाको मोटरेवल पुल ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्षपछि सम्पन्न हुदैछ। १० वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुल साउनको अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ। निर्माण सम्पन्न हुदै गरेको पुल। फोटो/दिनेश सुबेदी पुरानो ठेकेदारले काम नगरेपछि पुनः निर्माण जिम्मा पाएको एसियाटिक राज जेभी कन्ट्रक्सनले […]
धादिङ दुर्घटना अपडेट : मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो, २० जना अझै बेपत्ता
पुडासैनीको मोबाइलमा भेटिएको संदेशमा के थियो, होटेल मालिक पनि आए मिडियामा (भिडियो)